देश फर्काउने बिषय केही जटिल लाग्यो ! तर उच्च सतर्कता अपनाएर, डाक्टरको निगरानीमा बाक्लो मानव बस्तीबाट केही टाढा ब्यवस्थित तवरले राखिनुपर्छ । जति ढिलाइ गर्यो उत्तिनै नेपालीका लागि खतरा हुन्छ ! सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस ।
सक्छौ भने उदार मन बनाइ कालापानी र लिपुलेक उपहारस्वरुप देउ । तिमीलाइ नेपाली जनताले युगौँ युगसम्म पुजिरहने छ्न् । होइन भने यस्ता थोत्रा गाडी दिएर दुई चार नेताको मनमा मात्र बस्लाउ, तर सारा नेपालीको मनमा बस्न कदापि सक्दैनौ ।
मालबस्तू तथा ढुवानी साधनको अनलाइन निगरानी (भिसिटिएस) प्रणाली नबुझ्नेको लागि हाउगुजी छ । सिस्टमलाई पारदर्शी ,चुस्त र दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणाली नकारात्मक पक्कै हैन । तर हाम्रा सबै सन्यन्त्र र उपकरण बलिया अनि परिपक्क हुन आवश्यक छ । निरन्तर अपडेट गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो ।
कम्युनिष्टले गरिब र विपन्न परिवारका लागि काम गर्छन् भनेर हजुरबुवाको पालामा सुनिन्थ्यो । तर, अहिले शक्ति, घरघडेरी, पहुँच, आफन्तवाद लगायत कारण सच्चा कम्युनिष्ट भेटिनै मुश्किल छ ।
विद्यार्थीको संख्या कति छ ? अघिल्लो एक वर्षमै थाहा हुँदाहुँदै पाठ्यपुस्तक समयमै नपाउनु जनक शिक्षा सामग्री लगायत, जिम्मेवार निकायको लापरवाही नै हो । वर्षेनि विद्यार्थीले किताब नपाएर समस्या भोगीरहेका छन् । सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाएर समयमै चाहिने जति पुस्तक छापेर ढुवानीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
रााष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुन्छ भन्ने आशा त गरौं, तर भरोसा नगरौं । यसअघिका योजनाहरु पूरा नभएको देखिएकै हुन् ।
हामी नागरिकले तिरेको करबाट सांसदहरुले गाडी किन्न लोभ देखाएको सुन्दा अचम्म लाग्यो । यसै देशका नागरिक खान लगाउन नपाएर मर्ने अनि यसै देशका सांसदलाई नै महँगा गाडी चाहिने, कस्तो दुखलाग्दो कुरा ।
दुरसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीले आफ्ना तारहरु ब्यवस्थित नगर्दा शहर कुरुप हुँदै गएको छ । त्यस माथि बिग्रेका तारहरु त्यही छोडेर फेरी अर्को तार राखिन्छ कम्सेकम बिग्रेको तार त हटाईदेउ ।
लक्षमण बहादुर सुनार
नेपालमा यो घुस्याहा नीति हिलेसम्म जिवित राख्ने हो हामीले । घुस लिनु र दिनु दुबै अपराध हो । त्यसैले घुस लिनेलाई मात्र हैन दिनेलाई पनि कारवाही गर सरकार अब ।
नेताले नागरिकका बारेमा सोच्ने भए निर्मला पन्त बलात्कृत हुनुपर्दैनथ्यो । विकास द्रुत गतिमा हुन्थ्यो होला, लाखौ नेपालीहरु बिदेशिने थिएनन् होला अनि हाम्रो देश यति धेरै पछि पर्दैन थियो होला ।।
सांसदले आफूखुसी करोडौ रुपैया विकास खर्च गर्न पाउने भएपछी त अब सरकार को के काम ? हामीले बुझेसम्म त संसदिय व्यवस्थामा सांसदको काम कानून बनाउने, नागरिकको ईच्छा अभिव्याक्त गर्ने हो भने सरकारको काम विकास निर्माण गर्ने हो । हाम्रोमा त सांसदका नाममा नै बजेट चाहिने, यसो हो भने त सरकारले कानून निर्माण र संसदले कार्यपाल...
यातायात व्यावसायि र सरकार बिच १० प्रतिशत भाडा बढाउने सम्झौता त भयो । तर अहिले सोही निउमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा माग्ने र यात्रुसँग झगडा गर्ने प्रबृत्ति देख्न पाइन्छ । यो विषयमा सम्बन्धीत क्षेत्रको ध्यान जाओस् ।
दिनहु जसो दुर्घटनाका समाचार सुनिन्छन् । देशका अधिकांश सडकमा कालोपत्रे उप्किएको छ, बीचमा खाल्डो परेको अवस्था त । त्यसै त धुवा, धुलोले पुरै गाउँ सहर नै प्रदुषित भएको बेला अझ २० वर्षे पुराना गाडी चलाउन दिँदा त्यसबाट स्वास्थ र सुरक्षामा कस्तो असर पर्ला ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
दर्जनौ पुल तथा सडक निर्माणको ठेक्का ओगट्दै अलपत्र पार्ने निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरु पनि न्यून गुणस्तरको बनाएको व्यापक जनगुनासो खेपिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई सरकारले फेरी २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सरकारी ठेक्का दिनुलाई समृद्धिको अर्को उदाहरण मान्ने हामी नागरिकले ?
गणेश प्रसाद हुज्दार
कंचनपुरकी १३ वर्षीया वालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गर्ने अभियुक्तलाई सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्दा खोटाङका महिलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक थान चश्मा उपहार पठाउनु उहाँलाई व्यंगात्मक शैली हो । जुन एकदमै ठिक छ ।
सरकार त कति फेरिए तर शासन विधी फेरिएन । राज्यको प्रमुख रहेका बेला राज परिवारको सुरक्षा घेराभित्र वंशनाश भएको कुराको त केही पत्ता लागेन हामी त नागरिक नै हौं । के आशा गर्न सकिएला र न्यायको ।